जैकेट mishandling बिगार्छ छैन क्रममा, यो कसरी धुन र कसरी ज्याकेट तल धोइदिनुभएर पछि सुक्खामा थाहा महत्त्वपूर्ण छ, त्यसैले यसलाई आफ्नो प्रकार र गुण गुमाउन छैन।
विक्रेता पंख तिनीहरूले विवाह उतर कि दावा बनाउने, अप खरिद वस्तु, यो तरोताजा मेटाउन निर्णय र त्यसपछि जो ग्राहकहरु खराब लुगा फिर्ता पसलमा हो कि फेला परेन। यो जोगिन, विक्रेता, एक ज्याकेट किन्छ केही हेरविचार आवश्यक उत्पादन हो हरेक व्यक्ति को लागि खाता।
धेरै मानिसहरू निराशा द्वारा overtaken छन् पछि जब ज्याकेट तल धोइदिनुभएर पातलो भएको छ। अरूलाई खाली रहन गर्दा यसले fluff केही ठाउँमा straying, crumples किनभने छ। र यो तल, clumps सुक्खामा, ज्याकेट धोइदिनुभएर यस्तो लामो समय पछि एक अप्रिय बासी गंध प्राप्त गरेपछि सुक्खामा कसरी अस्पष्ट छ। र हामी कुरा अर्को प्रश्न आउँछ सुक्खामा गर्न सक्छन् भने: कसरी लुगा धुने पछि ज्याकेट तल fluff गर्न, यो यसको मूल राज्य फर्कन? पनि सधैं इच्छित परिणाम निम्त्याउन छैन माथि तल जैकेट को सबै भागहरु मिलान।
यी समस्या जोगिन सम्भव छ? यो सम्भव छ, र एकदम बस, यो केही आधारभूत नियमहरू लीन आवश्यक छ।
धो ज्याकेट मात्र पानी तापमान 30 डिग्री माथि उठन छैन जो नाजुक मोडमा पर्दाफास एक साधारण लुगा धुने मेसिन मा हुन सक्छ। तिनीहरूलाई केही पनि होसियार rinsing संग भित्र रहने, पाउडर तल को धेरै खराब कुल्ला छ: एउटा महत्त्वपूर्ण कारक डिटर्जेंट को विकल्प हो। जबकि फिलर उत्पादन, यसको विपरीत, फोहोर छ तपाईं को कपडा मात्र सतह सफा गर्न सक्नुहुन्छ ड्राई घर्षण कणहरु देखि धन को मद्दतले त्यसैले। पूर्ण को तरल कोष र अन्य प्रदूषक साथ यो देखि उखेलेर तल धोए। त्यहाँ "fluff" लेबल विशेष योगों छन् - तिनीहरूले एक आदर्श विकल्प हुनेछ।
तपाईं सबैभन्दा गर्न धुने अगाडि बढ्न अघि, निश्चित आफ्नो काम जटिल हुनेछ जो कि सबै बटन र zippers fastened गर्दै छन्, वा बिजुली विकृत हुन सक्छ, र बटनहरू समय सम्म अगाडी उत्पादन को dowdy उपस्थिति को छाप दिन्छ कि संलग्न आफ्नो ठाउँमा दल्नु बाँकी छन्। सबै माथि buttoned पछि, बाहिर भित्र ज्याकेट बारी। अब तपाईं धुन गर्न सक्नुहुन्छ।
पहिलो धुने, तर पनि आफ्नो tailoring को चरण मा उत्पादन मा हुन्छ कि प्राविधिक धूलो मात्र मोजा प्रदूषण को प्रक्रिया मा प्राप्त छैन ज्याकेट छुटकारा गर्न अभिप्रेरित छ। यो केवल सुकाएपछि देखा कि ताजा laundered आइटम मा सेतो स्थलहरू र streaks को कारण हुन्छ। थप - त्यस्ता समस्याहरूको जोगिन, तपाईं कम्तिमा दुई पटक ज्याकेट तल कुल्ला गर्नुपर्छ, र प्राथमिकताको।
ड्राई तल ज्याकेट अघि, वाशिंग पछि यो हटाउन हुनुपर्छ। त्यसैले यो पतली बन्न छैन, र fuzz को निकासी सुरु गर्नु अघि वाशिंग मिसिन ड्रम मा, clumps मा आवारा छैन, सबै भन्दा साधारण टेनिस बल केही ठाँउ, तीन वा चार टुक्रा पर्याप्त हुनेछ। तिनीहरूले मिसिन मा र सुरुमा राख्न सकिँदैन, लुगा धुने अघि, त्यसपछि यसलाई अझ प्रभावकारी, को बलमा मात्र vzobyut तल कारण हुनेछ, तर पनि धुलो बाहिर दस्तक। स्पिन सबैभन्दा स्वचालित वाशिंग मिसिन मा मोड delicates तल राखे रूपमा, कम गति मा ठाउँ लिन अनिवार्य छ।
अब कसरी ज्याकेट तल धोइदिनुभएर पछि सुक्खामा। त्यहाँ जटिल केही छ। यो हावा मा असम्भव कुरा अड्किनुहोस्। लामो तल ज्याकेट dries, धेरै पटक, यो मिलाउ को fluff सम्पूर्ण क्षेत्र खुला वितरण गरिएको छ भनेर, हरेक विवरण ध्यान। सुकेको अप फेरि fluff गर्न बल संग पुस्तक तल मिसिन मा ज्याकेट कारण प्रत्येक पंख को unfolding गर्न सम्भव fluffed। सोही, यस्तो स्पिन सुक्खा उत्पादन अनुचित लुगा धुने र सुकाउने प्रभावित मूल मोटाइ कुराहरू, पुनर्स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसैले, तपाईं घरमा तपाईँको ज्याकेट, शुष्क क्लीनर को सेवाहरू बिना सफा गर्न सक्नुहुन्छ। मुख्य कुरा कपडा पानी-विकर्षक गुण राख्न पनि अक्सर कुरा यस प्रकारको धुन छैन गर्न। समय, अक्सर erasable ज्याकेट डिटर्जेंट संग पानी मा भंग सबै विशेष पूरण रूपमा, भिजेको प्राप्त गर्न सुरु हुन्छ।
महिला वजन र विकास को दर: आदर्श अनुपात
हात Winches, आफ्नै हातले यांत्रिक लीवर प्रकार
समीक्षाहरू: "डाईसेट्रेस" (वजन घटानेका लागि) स्पेसलाइटमा
1 क्षेत्रीय क्लिनिकल अस्पताल, एकाटेरिनबर्ग: ठेगाना, फोन नम्बर, समीक्षा
अनाज आहार: छिटो र सुरक्षित वजन खोने!
17 dermatologists द्वारा आयोजित छन् छाला हेरविचार उत्पादनहरु को नियम को
Orthodontic दन्त चिकित्सा - एक उज्ज्वल मुस्कान को बाटो